စကားလုံးကြီးကြီးတွေက ပညာတတ်လေပေါက်တယ်ဟုတ်? - Myanmar Network
Posted by Soe Soe Win on November 17, 2014 at 17:33 in အင်္ဂလိပ်စာ သိကောင်းစရာ အဖြာဖြာ
လူအတော်များများဟာ စကားလုံးကြီးကြီးတွေသုံးရင် ပိုပညာတတ်လေသံပေါက်တယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်တရားကတော့ တကယ့်ကျွမ်းကျင်သူဆက်ဆံရေးသမားတွေဟာ
(၂) သူတို့ရဲ့စာဖတ်သူတွေလည်းနားလည်နိုင်လောက်တဲ့ စကားလုံးများကိုသာ သုံးစွဲကြတယ်ဆိုတာပါပဲ။
စာရေးခြင်း၏ရည်ရွယ်ချက်မှာ ဆက်သွယ်ရန်အတွက်ဖြစ်သည်။ ဆက်သွယ်ခြင်းဆိုသည်မှာ အဓိပ္ပါယ်တစ်ခုကို ဖန်တီးပြီး ဖလှယ်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ မိမိရေးလိုက်တာကို စာဖတ်သူနားမလည်လျှင် စာဖတ်သူနှင့် စာရေးသူအကြား မိမိစာဖတ်တဲ့အချိန် မည်သည့်ဆက်သွယ်ရေးမှဖြစ်ထွန်းမည်မဟုတ်ပါ။
ထိထိရောက်ရောက်ဆက်သွယ်နိုင်စေဖို့ ဘာသာစကားကို ထိထိရောက်ရောက် အသုံးချရမည်ဖြစ်သည်။ လူအများတို့နားလည်နိုင်လောက်သည့်အသုံးအနှုန်းများသုံးရ ပေမည်။
အခုတလော “detrimental” ဟူသည့်စကားလုံးများ “instrumental” သို့မဟုတ် “important” ဟူသည့် အဓိပ္ပါယ်နှင့် မှားယွင်းသုံးစွဲနေကြသည်ကိုသတိထားမိသည်။ ဥပမာအနေနှင့် အစည်းအဝေးတက်ရောက်ခွင့်တောင်းသည့် လူတစ်ယောက်ရေးသည့် ရုံးတွင်းစာတစ်စောင်ဖတ်လိုက်ရသည်။ စာက “It is detrimental that I go to the meeting next week.” ဟုရေးထားလေသည်။
ဖြစ်ချင်တော့ မှားသုံးလိုက်သည့်စကားလုံးသည် သူရည်ရွယ်သည့် ဆိုလိုရင်းနှင့် ဆန့်ကျင်ဘက် အဓိပ္ပါယ်သက်ရောက်နေသည်။ Detrimental သည် ထိုအစည်းအဝေးကိုတက်ရောက်ခြင်းကြောင့် သူ့တွင် အကျိုးယုတ်စေမည် ဟုဖြစ်နေသည်။ စာရေးသူတကယ်ဆိုလိုချင်သည်က (instrumental) “အရေးကြီးသော” ဖြစ်သည်။
မှားသုံးလိုက်သည့် စကားလုံးကြီးကြီး လူတတ်လေသံထက် ဆန့်ကျင်ဘက်ကိုသာဖြစ်စေသည်။ မှန်ကန် စွာသုံးသော်လည်း မလိုအပ်ဘဲသုံးလိုက်သည့် စကားလုံးကြီးကတော့ မိမိအား မယောင်ယာဆီလူးတတ်သူ၊ ဇာချဲ့တတ်သူ၊ စာအုပ်ကြီးသမား လေသံပေါက်စေသည်။ အကယ်၍ စာဖတ်သူသာ “pedantic” ဟူသည့်စကားလုံး၏ အဓိပ္ပါယ်ကိုသာ အဘိဓါန်တွင် ရှာရမည်ဆိုပါက ပြောချင်သည့်အချက်ကို စာဖတ်သူ နားလည်လောက်ပါပြီ။
Dailywritingtips.com မှ Mary ရဲ့ Big Words Make You Sound Smart, Don’t They? ကို ကိုးကားဘာသာပြန်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။
ပါတီပွဲတစ်ခုကို စီစဉ်ခြင်း (OrganizingaParty)